कोरोना संकटकै बीच ‘मंकीपक्स’ भाइरस महामारीको त्रास, के हुन् लक्षण? – Health Post Nepal
२०७९ जेठ ४ गते १०:२९
काठमाडौं–विश्वमा कोरोना भाइरसको संकट जारी रहेकै बेला अर्को भाइरसको त्रास फैलन सुरु भएको छ। ‘मंकीपक्स’ नामको भाइरस केही समयदेखि विश्वका विभिन्न देशमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ। यसप्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चासो व्यक्त गरेको छ।
मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङमा डब्लुएचओका अधिकारीहरुले यो भाइरस आफ्नो ‘राडार’ मा रहेको र यसप्रति निकै सतर्क रहेको जनाएका थिए।
डब्लुएचओकी मारिया वान केरखोवले आगामी दिनमा यो भाइरस पनि महामारीको कारक बन्न सक्ने बताइन्। यो भाइरस यौनजन्य सम्पर्कमार्फत् फैलिन सक्ने बताइएको छ।
हाल बेलायतमा यो भाइरसबाट प्रभावितको संख्या ७ रहेको जनाइएको छ। बेलायतमा गत ७ मेमा पहिलोपटक नाइजेरियाबाट फर्केका व्यक्तिमा मंकीपक्स रहेको पुष्टि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गरेका थिए। बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकायले मंकीपक्सका बिरामीहरु बढ्दै जाँदा समलैंगिक र यौन सम्बन्ध राख्ने समलिंगी समुदायलाई सचेत गराएको छ। निकायले यदि आफू र आफ्नो यौन साथीको शरीरमा अस्वाभाविक रुपमा रातो धब्बा देखिएमा तत्काल चिकित्सकको सम्पर्कमा जान आग्रह गरेको छ।
डब्लुएचओकी मारिया वान केरखोवले मंकीपक्सबाट प्रभावित हरेक विरामी तथा यसको सर्ने सीमाका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइन्। मंकीपक्स भएको शंका लागेका मानिसहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर परीक्षण भइरहेको उनले बताइन्।
के हुन् लक्षण?
पहिलोपटक सन् १९५८मा पत्ता लगाइएको यो रोग एक खालको जुनोसिस अर्थात् जनावरबाट सर्ने भाइरसका कारण हुने संक्रमण हो। यो अफ्रिकाका जंगली जनावरमार्फत् मानिसमा सरेको थियो।
कुनै संक्रमित जनावरले टोक्दा, उसको रगत या शरीरको तरल पदार्थलाई छुँदा या संक्रमित जनावरको मासु खाँदा यो संक्रमण हुने बताइएको छ। सामान्य यो रोगमा ज्वरो, शरीरमा डाबरहरु देखिने, लिम्फ नोड्स सुन्निने, टाउको दुख्ने, थकावट हुनेजस्ता लक्षण देखापर्छन्। यद्यपि संक्रमित भएको १४ देखि २१ दिनमा यो आफैं ठीक हुने बताइन्छ। तर घाउ चिलाउने वा दुख्ने भने भइरहन सक्छ। यो भाइरस संक्रमितसंँगको सम्पर्कबाट घाउ, श्वास तथा आँखा, नाक र मुखमार्फत् शरीरमा प्रवेश गर्नसक्छ।
यसअघि सन् २०२१ मा अमेरिकामा दुई जनामा यो संक्रमण देखिएको थियो भने सन् २०१७ को सेम्टेम्बरदेखि २०२२ को अप्रिलसम्म पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा ५५८ संदिग्ध बिरामी देखिएका थिए। जसमा २४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।